एक वर्षमा ५ हजार नेपालीले पाए अष्ट्रेलियन पीआर, सूचिको छैठौं स्थानमा ! « MNTVONLINE.COM
एक वर्षमा ५ हजार नेपालीले पाए अष्ट्रेलियन पीआर, सूचिको छैठौं स्थानमा !
अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षाका लागि आउने अधिकांश विद्यार्थीहरुले यहाँको डिग्री हासिल गरिसकेपछि आफुलाई यतै नै सेटल गरेको पाइन्छ । जीवनशैली, स्वास्थ्य व्यवस्था, विश्व मञ्चमा उपस्थिति, वातावरण, बहुसांस्कृतिक समाज लगायतका कुराहरुले उनीहरुलाई अष्ट्रेलिया अवसरको नयाँ गन्तव्य लाग्न थाल्छ ।
यसैक्रममा गएको २०२० जुनमा सकिएको आर्थिक वर्षमा कूल १ लाख ४० हजार ३ सय ६६ जनाले अष्ट्रेलियाको स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् पीआर प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसरी पीआर प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु आएको देशका आधारमा वर्गीकरण गर्दा पाँच हजार ४८ जना नेपालीले स्थायी बसोबास अनुमति पाएको देखिएको छ ।
पीआर पाउने सूचिको पहिलो नम्बरमा भारत छ । जसका २५ हजार ६ सय ९८ जनाले यो अवधिमा पीआर पाएका थिए भने दोश्रोमा चीन, तेश्रोमा बेलायत, चौथोमा फिलिपिन्स, पाचौंमा भियतनाम र छैठौंमा नेपाल रहेको छ । चीनबाट गतवर्ष १८ हजार ५ सय ८७ जनाले पीआर पाए भने बेलायतबाट १० हजार ६ सय ८१ जना, फिलिपिन्सबाट ८ हजार ९ सय ६५ जना, भियतनामबाट ५ सय ३ सय ९८ जनाले पीआर प्राप्त गरेका छन् ।
यो संख्यामा मुख्य आवेदक र निजका आश्रित पनि गणना गरिएको छ ।
धनगढीका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान आकस्मिक अवतरण !
जसपा आधिकारिकता विवादको टुंगो आज !
देशभर २२३७ जनामा कोरोना संक्रमण, थप १८ जनाको मृत्यु